Sharciga Hanti-Dhawraha Qaranka oo si fiican maanta loogu sharaxay Golaha Shacabka – Kalfadhi
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa kulankii maanta ee Golaha horkeenay xildhibaanada Hindise Sharciyeedka Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka, si uu u mariyo Aqrinta Saddexaad. Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda ayaa, isaga oo u aqrinaya Golaha Hindisaha, waxa uu sheegay inuu Xafiiska Hanti-Dhawrku awood u yeelan doono inuu baaro dhamaan xafiisyada guud ee dowladda, oo ay ku jiraan kuwa Dowlad Goboleedyada.
“Xafiiska Hanti-Dhawrku waxa uu baari karaa dhamaan xafiisyada guud ee dowladda ee madaxda qaranka. Waxa uu xaq u leeyahay inuu hubiyo in lacagaha la siiyo Dowladaha Federalka Xubnaha ka ah loo bixiyey sidii loogu talogalay”. Ayuu yiri Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur.
Sharciga oo ka kooban 8 qeyb iyo 41 qodob ayuu Xildhibaan Cilmi sheegay inuu si fiican u fasirayo waxa uu yahay Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka. “Xafiiska Hanti-Dhawrku waa inuu ka helaa ciddii uu uga baahhdo xog dad iyo macluumaadba ah, si uu u guto waajibaadka saaran ee baaritaanka hanti” ayuu yiri Xildhibaan Cilmi. “Marka uu xog baaritaan ku saabsan helo Hanti-Dhawrku waxa uu u gudbinayaa Baarlamaanka Soomaaliya, isaga oo nuqul siinaya Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Reysal Wasaaraha iyo Xafiiska Wasaaradda Maaliyadda” ayuu Xildhibaan Cilmi raaciyed hadalkiisa.
Xafiiska Hanti-Dhawraha waxa uu diiwaan-gelin doonaa dhamaan hishiisyada ay dowladdu la galeyso shirkadaha caalamiga ah, dowladaha iyo hay’adaha gudaha iyo dibadda. Waxaana war-bixinta Hindise Sharciyeedka lagu yiri “Waxa uu xafiisku hubinayaa dhamaan dhaqaalaha hishiis kasta ama qandaraasyada. Hishiis aan laga saxiixin Hanti-Dhawrkana xafiis lama galin karo”.
Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Cali Cabdi, ayaa sheegay inuu hindisahan muhiim u yahay hantida qaranka. “Hindise Sharciyeedka Hanti-Dhawrka Qaranka waxa uu muhiim u yahay maaliyadda dalka. Waxaan idinka codsaneynaa inaad noo ansixisaan”. Ayuu yiri Xikdhibaan Cali Cabdi. Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad, oo kulanka Golaha maanta shir-guddoominaya ayaa, isaga oo u mahadnaqaya Guddiga Maaliyadda, yiri “Waad ku mahadsantihiin sida aad u faahfaahiseen sharciga Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka”.
Qiyaastii 20 Xildhibaan ayaa isu diiwaan-gelisay iney kulankii maanta ka hadlaan, si ay uga aragti dhiibtaan hindisaha horyaalay, hase ahaatee Guddoomiye Cawad ayaa yiri “waxaa sharci ah, mar haddii la gaaro Aqrinta Saddexaad, in wixii fikir ah laga dhigo qoraal, haddana waxaa maqan xildhibaanadii kulan xaadiray qaarkood. Saasdaraadeed, sharcigaan waxaa cod la gelin doonaa maalinta Sabtida ah, kulankana waa uu noo xiran yahay”.
“Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka waxa uu xafiiska hayn karaa 5 sano, waxaana loo cusbooniinsiin karaa hal mar, markalena xilkaas ma qaban karo. Sidoo kale, Haddii uu ka dego xilkaas ma qaban karo xil siyaasadeed oo kale, mana ku biiri karo xisbi siyaasadeed” ayaa lagu yiri war-bixintii laga hor aqriyey Golaha Shacabka. “Waxa uu xilkiisa ku weyn karaa iscasilaad rabitaankiisa ah, taas oo uu u gudbin karo Madaxweynaha iyo inuu dhinto ama ay Maxakamadi xukunto” ayaa sidoo kale ku qoran hindisaha.
Xafiiskan waa madax-banaan yahay, isagoo si madax-banaanna u qaadan kara shaqaale, hase ahaatee hufaya caadyaalnimada sida uu wax u shaqaaleysiinayo. Si loo hubiyo inuu Hanti-Dhawrku gudanayo waajibkiisa ayaa waxaa xeerka lagu soo daray qodob sharci ka dhigaya inuu Baarlamaanku magacaabayo Hanti-Dhawre madax-banaan, oo baaraya Xafiiska Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka, sanadkiiba mar.
Wasaaradda Caddaaladda iyo Garsoorka ayaa dhameystirtay Xeerka Qareennada Soomaaliyeed